Honduras: fakana sary mandritra ny tsy fahazoana mivezivezy · Global Voices teny Malagasy
Honduras: fakana sary mandritra ny tsy fahazoana mivezivezy
Voadika ny 30 Septambra 2009 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Telo volana taorian'ny naharesen'ny filoha Mel Zelaya tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana izay heverin'ny sasany fa rariny ary ataon'ny hafa kosa ho tsy ara-dalàna, dia niverina tany Honduras izy ny 21 septambra lasa teo ary mialokaloka ao amin'ny tranon'ny masoivohon'i Brésil any Tegucigalpa renivohitra. Niteraka savorovoro politika sy tsy fitovian-kevitra eny an-dalana rehetra eny izany fiverenany izany, niteraka horohoro ho an'ny mponina izay hianjadian'ny tsy fisian'ny sakafo hohanina vokatry ny tsy fahazoana mivezivezy manerana ny firenena navoakan'ny governemantan'i Roberto Michelitti.
Any amin'ireo tana-dehibe manerana ny firenena dia tsy miraharaha izany tsy fahazoana mivezivezy izany ny mpanara-dia an'i Zelaya ary manomana fihetsiketsehana foana, na dia eo aza ny fampitandremana ataon'ny governemanata sy ny mpitandro ny filaminana. Vokany, nisy ny fifandonana tamin'ireto farany ireto ary nahitana fahavoazana sy fisamborana an-jatony [es]. Natsahatra vonjy maika ny tsy fahazoana mivezivezy manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 4 hariva ny 23 septambra mba hahafahan'ny mponina mividy izay zavatra ilainy. Nanoratra i Aaron Ortiz avy any Pensieve :
Maro tamin'ny olona no mbola tany am-piasana raha nanambara ny fiverenany i Zelaya ka tsy afaka niomana ho amin'ny tsy fahazoana mivezivezy mandritra ny andro maro izy ireo.
Ankoatry ny filaharam-be, ny “venta loca” (varotr'adala = varo-boba) eny an-tsena sy ny talatalana foana any amin'ny fivarotana lehibe, satria mponina an-tapitrisany no manangona sakafo, labozia, solika sy ny zavatra hafa mety ilainy.
Hatramin'ny niverenan'i Zelaya tany an-toerana dia mampiasa ny fampitam-baovao azy manokana ny tsirairay hitantarana ny zava-misy manerana ny firenena. Maro ireo maka sarimihetsika ary mandefa izany ao amin'ny YouTube. Naka sarimihetsika teny amin'ny manodidina ny tranon'ny masoivohon'i Brésil i Daniel, sary mampiseho andiana mpitandro ny filaminana maro manodidina ny trano. Sary nalaina ny 23 septambra io, ary hoy izy “omaly dia nisavoritaka be tety.”
Mpampiasa YouTube iray Mirtria1 no naka sarimihetsika tamin'ny findainy nalaina avy eny amin'ny toerana fitsikilovana ao San Pedro Sula, manakaiky ny fiangonana ao an-tanàna.
Habla Honduras [es] dia vohikalan'ny fikambanan'ny mpanao gazety manaiky ny vaovao azo avy amin'ny aterineto, mailaka na finday. Ny sampany ao amin'ny YouTube no nandefa sarina lehilahy iray nosamborina tany Morazana akaikin'i Tegucigalpa ny 22 septambra lasa teo.
2 andro izayFanoherana
5 andro izayVenezoela